ဝဟာဘီ အကြောင်း နားလည် သဘောပေါက်ရန်အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
အလိုရှိသည့် စာမျက်နှာ ဝဟာဘီ အကြောင်း နားလည် သဘောပေါက်ရန်
ဆော်ဒီ လေကြောင်း ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်မှု ကြောင့် အပြစ်မဲ့ ယီမင် ပြည်သူများ သေဆုံး၊ဒဏ်ရာ ရ
မတျ ၂၈, ၂၀၁၅ - ၁၂:၃၆ နံနကျ
ဆော်ဒီ နှင့် မဟာမိတ် နိုင်ငံများ၏ လေကြောင်း ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်မှု ကြောင့် အပြစ်မဲ့ ယီမင် ပြည်သူများ ကလေး၊မိန်းမ ၊ယောက်ကျား ၊အရွယ်စုံ ဆယ်ဦး ကျော် သေဆုံး၊ဒဏ်ရာ ရ ခဲ့ကြပါတယ်။ ၎င်းမှ အချို့ ရင်နာဖွယ် သနားဖွယ်ရာ ဓာတ်ပုံ အချို့ ကို တင်ပြ လိုက်ပါတယ်။
ဆက်ဖတ် ရန် ...
ဆော်ဒီအာရေဗျ ဝဟာဘီ နိုင်ငံမှ မွတ်စလင်မ်အချင်းချင်း အနိုင်ကျင့်နေပုံ
မတျ ၂၈, ၂၀၁၅ - ၁၂:၀၈ နံနကျ
ဆော်ဒီအာရေဗျ ဝဟာဘီ နိုင်ငံမှ မွတ်စလင်မ်အချင်းချင်း အနိုင်ကျင့်နေပုံ ကွာန်းဆရာမှ ပီပြင်စွာ ပုံဖော်ထားပါတယ်။
ဆော်ဒီ တိုက်လေယာဉ် အစီး ၁၀၀ ယီမင်နိုင်ငံ ၏ မြို့ များ ကိုဝင်ရောက် ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်
မတျ ၂၆, ၂၀၁၅ - ၁၁:၅၆ နံနကျ
ဝဟာဘီ မင်းဆိုးမင်းယုတ် အုပ်ချုပ်တဲ့ ဆော်ဒီ နိုင်ငံ မှ မိမိတို့ အာဏာ မြဲရန် မတ်လ ၂၅ရက်နေ့ ညတွင် မိမိမစာမိတ်နိုင်ငံများ မိမိအဖေခေါ်နေရသည့် အနောက်နိုင်ငံများ ပေါင်းပြီး ယီမင်နိုင်ငံ ၏ မြို့ များ ကို တိုက်လေယာဉ် အစီး ၁၀၀ ဖြင့် ဝင်ရောက် ကျူးကျော်စေပြီး ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ စွန်နီမွတ်စလင်မ်များ ဖြစ်တဲ့ ပါလက်စတိုင်းကိုကျူးကျော်နေတဲ့ အစ္စရေးကိုကြ တော့ ခုခံ တိုက်ပေး ရန် တိုက်လေယာဉ်မလွတ်ပေးဘဲ ၊ မိမိမွေး တပည့် အစိုးမဖြစ်မည် ကတစ်ကြောင်း ရှီအာ အစိုးရ တက်လာမည်ကတစ်မျိုးစသည့် စိုးရိမ်စိတ်များနဲ့ ယီမင်နိုင်ငံ ကိုဝင်ရောက်ကျူး ကျော်ဖို့ တိုက်လေယာဉ်များ လွတ်ခဲ့ပါတယ်။ယခု ဆော်ဒီ ရဲ့ ရုပ်အစစ် ကို အသိဥာဏ် ရှိသူ တိုင်းထင်ရှားစွာ တွေ့ နိုင်ပါပြီး။
၁၀ပါးမြောက် အေမာမ် (အ.စ) နှင့် ၁၁ပါးမြောက်အေမာမ် (အ.စ) ၏ ရောင်ဇာတော် အား ဗုံးပစ်၍ သက္က်ဖီးရီ အကြမ်းဖက် အစွန်းရောက်များမှ တိုက်ခိ
ဇနျနဝါရီ ၂, ၂၀၁၅ - ၂:၂၁ ညနေ
ရှီအာ အေမာမ်မီယာ တို့၏ ၁၁ပါးမြောက် အေမာမ် အေမာမ်ဟစန် အစ္စကရီ (အ.စ) ၏ ရှဟဒသ်နေ့ အချိန်အခါ တွင် သက္က်ဖီးရီး အစ္စလာမ်ခုတုံးလုပ် အကြမ်းဖက် အစွန်းရောက် အဖွဲ့ သားများမှ ၁၀ပါးမြောက် အေမာမ် အေမာမ်ဟစန် အစ္စကရီ (အ.စ) နှင့် ၁၁ပါးမြောက်အေမာမ် အေမာမ်အလီနကီ (အ.စ) ၏ ရောင်ဇာတော် အား ဗုံးပစ်၍ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။
ဒါအေရ်ှအကြမ်းဖက် သူပုန်တွေ များ က လူတစ် ယောက်အား မှော်တတ် သည် ဟု စွဲချက် တင် ပြီး ရက်စက်စွာ ခေါင်းဖြတ် ကွပ်မျက်
ဒီဇငျဘာ ၂၇, ၂၀၁၄ - ၈:၂၃ ညနေ
အစ္စလာမ် ဘာသဝင် မပြောနှင့် လူမဟုတ်သည့် အဖွဲ့ IS (ခ) ဒါအေရ်ှအကြမ်းဖက် သူပုန်တွေ များ က လူတစ် ယောက်အား မှော်တတ် သည် ဟု စွဲချက် တင် ပြီး ရက်စက်စွာ ခေါင်းဖြတ် ကွပ်မျက် ခဲ့လေသည်။ ဤလုပ်ရပ်အား အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ၏ နောက်ဆုံး တမန်တော် ဟဇရသ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ပင် မလုပ်ခဲ့ချေ။လုပ်ရန်လည်း မမိန့်ထားချေ။
အစ္စလာမ်ခုတုံးလုပ် တာလီဘန်များ ပေရှာဝရ် မြို့ ရှိ စာသင်ကျောင်း အား တိုက်ဆိုက်
ဒီဇငျဘာ ၁၇, ၂၀၁၄ - ၁၂:၀၉ နံနကျ
စစ်သွေးကြွ အစ္စလာမ်ခုတုံးလုပ် တာလီဘန်များမှ ပေရှာဝရ် မြို့ ရှိ ပါကစ္စတန် စစ်တပ် ၏ စာသင်ကျောင်း အား ယနေ့ နေ့လည်အချိန် ခန့် တွင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါသည်။၁၃၂ဦး သေဆုံး သွားပြီးအယောက်၂၀၀ကျော် ဒဏ်ရာရခဲ့ပါသည်။ သေဆုံးသူများတွင် အယောက် ၁၀၀ကျော်မှ ကျောင်းသားများ ဖြစ်ကြပါသည်။
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ ရှီအာ များနေထိုင်သည့် နေရာကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည် သက္က်ဖီးရီ များ ဇိဝိန်ချုပ်
နိုဝငျဘာ ၂၈, ၂၀၁၄ - ၁၂:၁၇ နံနကျ
အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ - ဆီးရီးယား နိုင်ငံ ဟလဗ်ဒေသ ရှိ ရှီအာ များနေထိုင်ရာ နဗလ်မြို့ နှင့် အလ်ဇဲဟ်ရာ မြို့ နှစ်မြို့ အား သက္က်ဖီးရီ များ ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါသည်။ဤတိုက်ခိုက်မှုကို ရှီအာမိုဂျာဟစ်များက ခုခံတော်လှန်ခဲ့ရာ သက္က်ဖီးရီ ၁၀ယောက်ကျော် ကို ဇိဝိန်ချုပ် အောင်ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါသည်။
တော်တော်မိုက်ရိုင်းစော်ကား တဲ့ သက္က်ဖီးရီး ၊ ဝဟာဘီ ဆော်ဒီ ရဲ တစ်ဦး၏ မွတ်သလင်မ် မှန်သူတိုင်း ၏ နှလုံးသား ကိုနာကျင်စေသည့် မြင်ကွင်
မေ ၂၇, ၂၀၁၄ - ၉:၄၉ နံနကျ
တော်တော်မိုက်ရိုင်းစော်ကား တဲ့ သက္က်ဖီးရီး ၊ ဝဟာဘီ ဆော်ဒီ ရဲ ပါလား ? မွတ်စလင်မ် ကော်ဟုတ်ရဲ့လား ? လအ်နသ် ထာဝရ ကျရောက် ပါစေ ။
သက္က်ဖီးရီး များ နှင့် တိရစ္ဆာန် တို့ကွားခြားပုံ ပြ ဓာတ်ပုံ
ဖဖေျောဝါရီ ၉, ၂၀၁၄ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ဖြစ်ပျက် နေရှာတဲ့ စလ်ဖီများ ကိုကြည့်ပါအုန်း ....!!!
ဇနျနဝါရီ ၃၁, ၂၀၁၄ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
စလ်ဖီ(ခ)ဝဟာဘီ(ခ) သက္က်ဖီးရီ များ ၏ ကလ်မာယေပါးက် ကို စော်ကားနေကြပုံ
ဇနျနဝါရီ ၂၆, ၂၀၁၄ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ဝဟာဘီ (ခ) စလ်ဘီ ၏ အလ္လာဟ့် အိမ်တော် အတွင်း ၌ ဖြစ်ပျက်နေတာ ကို ကြည့်ပါအုန်း ဗျား ....
ဇနျနဝါရီ ၁၉, ၂၀၁၄ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ဝဟာဘီ (စလဖီ) ချောင်းတိုက်သမားများ အနေဖြင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ် တွင် ဗုံးတပ်၍ ရှီအာ ဗလီ အနီး ဖောက်ခွဲမှုကြောင့် ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ ပါရာ
ဇူလိုငျ ၂၈, ၂၀၁၃ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
မိုအာဝေယာ ၏ ဘဝသမိုင်း အကျဉ်း
မေ ၁၅, ၂၀၁၃ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ပလပ်စတစ် ဖြင့် ပြုထားသည့် ယောက်ကျားတန်ဆာ အတု အမျိုးသမီး သုံးနိုင် / ဝဟာဘီ ဖသ်ဝါ
မတျ ၁၁, ၂၀၁၃ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ရှီအာ ဆန်ကျင့်ဖက် ဖသ်ဝါ ၂ခု / ဆော်ဒီ ဝဟာဘီ မွဖ်သီ ရှိက်ခ်အဗ်ဒွလ် လ္လာဟ်ဗင် ဂျီဗရီး(န)
ဖဖေျောဝါရီ ၁၀, ၂၀၁၃ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ဆော်ဒီ ဝဟာဘီ မွဖ်သီဖြစ်သည့် ရှိက်ခ်အဗ်ဒွလ် လ္လာဟ်ဗင် ဂျီဗရီး(န) အနေဖြင့် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ- ရဖေဇီး (ရှီအာ) များသည် မိုရ်ှရေက် ဖြစ်ပေသည်။အကြောင်းမှာအရာရာတိုင်းကို အလီ(ရ.သွေ)၏နှစ်မြို့မှုအတွက်၊ဝမ်းနည်းမှုအတွက် လုပ်ကြသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။ပြီးနောက်အလီ(ရ.သွေ)၏သားသမီးများနှင့်၎င်းတို့၏အေမာမ်များ၏အမည် ကိုထပ်ကာတလဲလဲခေါ်ဆိုကြပေသည်။ဤသည်အစ္စလာမ်သာသနာအတွင်းဝင်ရောက်လာသည့်အကြီးမားဆုံးရှေရ်က် ဖြစ်သည်။ရဖေဇီး (ရှီအာ)များသည်၎င်းတို့၏လုပ်ရပ်များကြောင့် ကာဖေရ် ဖြစ်ပေသည်။
ဝဟာဘီ(ခ)စလဖီ ဖေရ်ကာ၏ ဗိသုကာကြီး အေဗ်နေသိုင်မီယာ
ဝဟာဘီ(ခ)စလဖီ၏ အစ္စလာမ် ကို ကြည့်ပါအုန်း
ဖဖေျောဝါရီ ၅, ၂၀၁၃ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အစစ်ကို မဆိုထားနှင့် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်မဟုတ်ပေမဲ့ ကိုယ်ချင်စာတတ်သူ ၊မိမိတို့၏ ဘာသာတရားကို သေသေချာချာ လက်ဝယ် ကိုင် ထားသူများပင် အခြားဘာသာခြားများ၏ခဝပ်ကိုးကွယ်၊ဝတ်ပြုမှု၊ ရှင်ခိုးမှု ၊ ကိုလေးစား ရိုသေကြပေသည်။
Saiful ၏ ဆွဟာဗာ နှင့် မိုနာဖိက် ရှီအာ Operations အတွက် ရှယ် အဖြေမှန်
ဒီဇငျဘာ ၁၈, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ဝဟာဘီ ၊ဂျွန်ဒွလ်ရှိုင်တန် အကြမ်းဖက်ဝါဒီ saiful ၏ လေလုံးများ နှင့် ကျွန်တော် ရှိက်ခ်ဂျမားလ် ၏ အဖြေ
ဒီဇငျဘာ ၁၇, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ဝဟာဘီ Saiful Battar ၏ ရှီအာအေမာမ်မီယာ တို့၏ အဇါဒါရီ ကို လှောင်ပြောင် စော်ကားပြက်ရယ်ပြုထားပုံ
ဒီဇငျဘာ ၁၀, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
၂၀၁၃ အတွက် ဆန်တန်ချိန် တစ်သိန်း တင်သွင်းဖို့ ဖိလစ်ပိုင် လျာထားဆဲ ၊
အောကျတိုဘာ ၉, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ဂျမေအသွလ်အဇ်ဟရ် တွင် ဝဟာဘီ များ၏ အာနိသင်ကြောင့် အီဂျစ် ဒုက္ခရောက်
စကျတငျဘာ ၁၁, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
အီဂျစ်နိုင်ငံရှိ ပြည်သူလူထု အနေဖြင့် ဂျမေအသွလ်အဇ်ဟရ် တွင် ဝဟာဘီ များ၏ အာနိသင် သက်ရောက်လာ မှုကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါသည်။
ရှီအာ အာလင်မ် အား စကားအချေအတင် ပွဲတွင် အောင်နိုင်သူအား ရေယာ တစ်သန်းဆု ချီးမြှင့်မည်
ဩဂုတျ ၂၇, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ကောင်စဲရ်အာရဘီရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းတွင် ရှီအာအိုလမာမှအာလင်မ်တစ်ပါးဖြစ်သူအာယာသွလ်လ္လာဟ်ဆရက်ကမာလ်လိုလ် ဟိုင်ဒရီနှင့်စကားအချေအတင်ပွဲတွင်အောင်နိုင်သူအား၊စအူးဒ်များဖက်မှတစ်သန်းရေယာဆုချီးမြှင့်မည်ဟုကြေငြာထားပါသည်။
အံ့သြစရာ အကောင်းဆုံး ကမ္ဘာ အမျိုး သမီးများ ဆိုင်ရာ ကွန်ဖရင့် ဓာတ်ပုံ၊ဆော်ဒီ
ဩဂုတျ ၁, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
အကြမ်းဖက် အစွန်းရောက် ဝါဟာဘီ ရှိက်ခ် အဟ်မဒ် အလ်အစီးရ် ၏ လက်ဘနွန် နိုင်ငံ တွင် ဒုတိယအကြိမ် မြောက် အရှုပ်တော်ပုံ
ဇူလိုငျ ၂၈, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
အီရတ် နိုင်ငံ တွင် အကြမ်းဖက် သမားများ ၏ ဆက်တိုက် ဗုံးပေါက်ကွဲ မှုကြောင့် ၉၃ ဦး သေးဆုံး အယောက် ၁၀၀ ဒဏ်ရာရ
ဇူလိုငျ ၂၇, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ဇူလိုငလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် အီရတ် နိုင်ငံ၏ ပြည်နယ်များတွင် အကြမ်းဖက် သမားများ ၏ ၂၆ ကြိမ် ဆက်တိုက် ဗုံးပေါက်ကွဲ မှုကြောင့် ၉၃ဦး သေးဆုံး အယောက် ၁၀၀ ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။ အီရတ် နိုင်ငံတွင် ဆော်ဒီ စလဖီ (ဝဟာဘီ) များ၊ ၎င်းတို့၏အပေါင်း အဖော်များ၏ ကူညီမှုဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုများ ၊သတ်ဖြတ် မှု များ လာကြောင်းလည်း သိရ ပါသည်။ အဟ်လေ့ဘိုက်(အ.စ) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဇူလိုငျ ၉, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ဝဟာဘီများ၏အရှုပ်ထုတ်၊လက်ဘနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဝဟာဘီ(စလဖီများ)၏ရှိက်ခ်အဟ်မဒ်အလ်အစီးရ်အနေဖြင့် လက်ဘနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင်မငြိမ်းမသက်ဖြစ်ရန် ကြိုးစားနေသည့်မရိုးသားသည့်လုပ်ရပ်များပြဓာတ်ပုံ များကိုအောက်ပါအတိုင်းရှု့နိုင်ပါသည်။
ရှီအာ အာလင်တစ်ပါးလုပ်ကြံခံရ ၊ဆီးရီးယား
ဇှနျ ၂၃, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ရှီအာ အာလင်တစ်ပါးလုပ်ကြံခံရ ၊ဆီးရီးယား လက်နက်ကိုင် သောင်းကြမ်းသူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှဟဇရတ်ဇိုင်နပ်(စ.အ) ရောင်ဇာတော်အနီး၊ဆီးရီးယားနိုင်ငံအိုလမာယေ ရှီအာမှအာလင်မ်တစ်ပါးအားလုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
ဇှနျ ၁၉, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
အေမာမ်မူစာယေကာဇင်(မ်)(အ.စ)အားဇေယာရတ်ပြုသူ ၃၂ဦးရှဟီးဒ်ဖြစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ။ ။ အေမာမ်မူစာယေကာဇင်(မ်)(အ.စ)အားဇေယာရတ်ပြုသူ ၃၂ဦး သည်ဘဂ္ဂဒတ် မြို့ တွင် ကား ၂ စီး မှဗုံးထ ကွဲရာ ရှဟီးဒ်ဖြစ်သွားရလေသည်။